Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Abasebenzi beAlitalia basebenzela simahla
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
U-Alitalia akahlawuli abasebenzi
I-Alitalia ayihlawuli imivuzo yayo. Yithi kubomishinala: "Siza kuhlawula ngemali yebhrend." Ukuza kuthi ga ngoku, inkampani ihlawule kuphela isiqingatha semivuzo yangoSeptemba. Imali eseleyo iya kuhlawulwa kuphela emva kokuba abakhomishinala "benobungqina besiphumo sophawu lwentengiso."
Ithenda inokuhlala iiveki ezininzi, kuba izithembiso zokuqala zokubopha kufuneka zingeniswe nge-4 ka-Okthobha nge-2 pm, ngexabiso elincinci le-290 yezigidi zeerandi (kunye neVAT).
Kodwa akukho mphathi ubonakala enomdla wokuthenga uphawu ngeli nqanaba.
"Ukuxabisa akunakwenzeka," kusho u-Alfredo Altavilla, uMongameli we-ITA, i-airline entsha, mhlawumbi iyona nkampani inomdla kwi-brand yenkampani endala.
Ixabiso leSiseko 290 yezigidi
Ukwenza isithembiso kweli nqanaba, kufuna ukuhlawulwa phantsi kwe-40 yezigidi zeerandi. Kuphela ngabantu abanelayisensi yokuthuthwa komoya okanye i-AOC (isiQinisekiso sokuSebenza koMoya) kunye nexabiso elinesiqingatha sezigidi ezingama-200 abanokujoyina ukuzibophelela.
Ukuba akukho zinikezelo zilingana nexabiso elisezantsi, abakhomishinala baya kuvula umjikelo wesibini wezithembiso zokubopha.
Ifowuni yeethenda, ebizwa ngokuba "sisimemo," ibonelela ngesigaba sesibini ukuba akukho zibonelelo zifanelekileyo kwisigaba sokuqala. Kule meko, abakhomishinari "baya kuqhuba inqanaba lesibini lebhaso ngesicelo kubo bonke abafundi abamkelweyo ukuba banikezele ngezibophelelo ezibophelelayo ngokunciphisa ixabiso elibonelelweyo."
Akuzange kuthethwe ngexabiso lesiseko kumjikelo wesibini. I-brand inexabiso leencwadi ezili-150 yezigidi kwiingxelo zezemali zika-Alitalia. Ke ngoko akunakulindeleka ukuba iwele ngaphantsi kweli nani.
Umjikelo wesithathu: Ukukhetha ngokuzikhethela kwabaKhomishinala
Ukuba kwisigaba sokuqala njengakwisigaba sesibini bekukho ezinye izibonelelo, izakulandela ukuya kunyusa, ukuqala kwesona sinikelo silungileyo, semali "engekho ngaphantsi kweshumi lezigidi zeerandi." Ukuba umjikelo wesibini nawo awonelisi, inkqubo iya kutshintshwa. "Abakhomishinari abangaqhelekanga baya kuthi emva koko baqhubeke nokuthengisa uphawu ngaphandle kwemiqobo yenkqubo eya kwabo basebenzayo kwezoqoqosho," utshilo isibhengezo.
Kumjikelo wesithathu, kuya kubakho, ke, ngokubona kwabakhomishinala. Kweli nqanaba, ITA inokungena, ejonge ukuthenga uphawu kodwa ngaphandle kokuphelelwa ngamandla.
Isimemo esipapashwe ngabakomishinala sithi: "Uphawu lwentengiso luya kufumaneka kulowo uza kuzuza ixabiso nge-31 kaDisemba ka-2021."
Yabasebenzi abangama-10,500 XNUMX baseAlitalia, ke ngoko, kulindwe ixesha elide ukufumana ibhalansi yomvuzo wabo ngoSeptemba. Kwaye akuqinisekiswanga ukuba ekugqibeleni kukho imali. Kunxibelelwano lwangaphakathi, ikhomishina uGabriele Fava, uGiuseppe Leogrande, noDaniele Santosuosso babhalela abasebenzi:
“Njengoko nisazi, imisebenzi yethu ebandakanyiwe kwisebe leenqwelomoya kulindeleke ukuba iphele nge-14 ka-Okthobha, kwaye, ke, siyanyanzeleka ukuba silawule imali yenkampani ngokungaguquguqukiyo nale njongo, sithathela ingqalelo ukuba ukuvalwa kwentengiso ngo-Agasti 24 kuvelise Ukuma okumandla kwingeniso.
“Silusizi kakhulu ukunazisa ukuba imivuzo yale nyanga izakuhlengahlengiswa nge-50% ngexabiso ngoMvulo, nge-27 kaSeptemba, ngelixa i-50% eseleyo izakufakwa kuwe nje ukuba sinobungqina besiphumo yesibhengezo sophawu, njengoko kufunwa yiKhomishini yaseYurophu. ”
Ngapha koko, umthetho ubonelela ukuba iimali ezivela ekuthengisweni kweeasethi zisetyenziswa njengeyona nto iphambili ukuxhasa iindleko ezikhoyo, ikakhulu imivuzo.